कसैबाट १ रुपै सहयोग नलिइ : संक्रमितको घरघरमा पुगेर सेवा गर्ने बाग्लुङकी ‘साहसी चेली’ नितु ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कसैबाट १ रुपै सहयोग नलिइ : संक्रमितको घरघरमा पुगेर सेवा गर्ने बाग्लुङकी ‘साहसी चेली’ नितु !
कोरोनाभाइरस चाँडै नियन्त्रण हुने र स्थिति सामान्य बन्ने कुरामा नितु ढुक्क छिन् । सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफू सचेत रहेर मानव सेवा गर्न उनको अनुरोध छ । केही दिनअगाडि सुदूरपश्चिममा एक स्वास्थ्यकर्मीको निधन भएको थियो । नितुलाई यस्ता समाचारले पीडा दिने गर्छ । भन्छिन्, ‘राज्यले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । उपकरणहरू र नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याउनुपर्‍यो । राम्रो र सेवा सुविधा दिने सहुलियत शुल्कका अस्पतालहरू खोल्नुपर्‍यो । ‘राज्यको नजरमा सधैँ पेलिँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको महत्त्व जनताले पनि यतिबेला बुझिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । लोकान्तर
भोलि नेपाल बन्द ! विशाल आन्दोलन गर्ने घोषणा
दशैँका यात्रु बोकेको बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त : १८ जना घाइते, गर्भवती महिलासहित ९ जना गम्भिर